Kuzo zonke iingxaki ezikhuselekileyo zokukhulelwa, i-hypoxia yenza i-20% kunye ne-45%. Kuloo bantwana abahlala besweleka ngokuqhubekayo kwintswelo ye-oksijeni, kukho ithuba eliphezulu lokuba bazalwe ngokungaqhelekanga. Iintsana ezinjalo ziyakhathazeka kwaye zigula rhoqo. Ukuba i-hypoxia eqaqambileyo yenzeke ngexesha lokubeletha, oku kungabungozi obucacileyo ebomini bomntwana. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuba ngexesha lokukhulelwa umama ozayo kufuneka abe phantsi kweliso lugqirha.
I-Hypoxia ye-fetus iphakathi kweentlobo ezimbini: ezinzima kunye ezingapheliyo. Masiqwalasele ngokubhekisele ngamnye kubo.
I-hypoxia eyiyo. Phantse kuzo zonke iimeko, kwenzeka ngokuthe ngqo ngexesha lokuhanjiswa ngokwaso, ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo zabasebenzi: xa intloko yesisu ixinzezelekile kwixesha elide kwi-pelvic cavity, xa intambo yesigxina igxininiswe okanye iyancitshiswe, xa kuphazamiseka ukutshatyalaliswa kwembombo kunye nokunye. Kwiimeko apho i-hypoxia ekhulayo iqhubeka khona, oku kubangela ukunyuka okuthe kratya kwingcinezelo yegazi kwintsana, i-tachycardia ivela, kunye nokuvuvukala kwezicubu kunokwenzeka, mhlawumbi nangomonakalo wesifo esilandelayo. Konke oku kukhokelela kwimiphumo emibi kakhulu, kaninzi ayinakuphikiswa. Ukuphulukisa imisebenzi yezitho ezibalulekileyo, kwaye nokuba nesiphumo esibulalayo sinokwenzeka.
Ngelishwa, kwiimeko ezinjalo akunakwenzeka ukuqinisekisa ngaliphi na indlela. Into engathandekiyo kule meko kukuba umfazi akanako ukusebenzisa nayiphi na impembelelo esebenzayo kule nkqubo. Into efunwa nguye kulo mzuzwana kukugcina ukuzinyanya ukuze kungabinzima imeko ekhoyo. Makugqirha ugqirha yonke into ezandleni zakhe.
Hypo hypoia. Kwenzeka xa kukho ukungabikho kwe-oksijini ngumntwana ngexesha elithile. Ubungakanani obuya kuthintela kakubi impilo yemntwana kuxhomekeke kwithuba elingakanani kwaye lide lomelele kangakanani indlala yomoya.
Iimbangela ze-hypoxia engunaphakade zilandelayo.
1. Impilo ebuthathaka kumama ozayo. Ukuba unina unesifo se-anemia, izifo ze-cardiovascular, i-pneumonia, i-asthma ye-bronchial, njl njl, oku kungabangela ukungabi niselo yomoya.
2. Imiphumo eyahlukileyo ekuphuhliseni umntwana. Ngokomzekelo, izifo ze-hemolytic kunye nezofuzo, izifo ezithintekayo ngaphakathi kwe-intrauterine, i-heartformed malformations, intsholongwane.
3. I-Pathology ye-uteroplacental kunye ne-umbilical cord flow flow. Le ngenye yezizathu eziqhelekileyo ze-hypoxia engapheliyo. Le yintambo yomkhonto, amaqhina kuwo, ukubetha kwayo kunye nokugqama ngexesha lokubeletha, umntwana we-perenashivanie, i-deterenti ye-placenta, ukuzalwa ngokukhawuleza okanye okukhawulezayo kunye nokunye.
4. Ukuphelisa okanye ukuphazamisa inxalenye yomoya.
Ungathini "ukuphosa" i-hypoxia eqalisile? Enye yeempawu zayo, apho owesifazane okhulelweyo angabonakalisa yena ngokwakhe, kukunyusa nokwandisa kwiminyango yomntwana. Ngaloo ndlela, wenza ukuba kucace ukuba uyagula. Kakade ke, izizathu zokutshutshiswa okunamandla ziba ngabanye, kodwa kungcono ukukhuseleka nokubika yonke into ngexesha logqirha okhulelwe. Mhlawumbi uya kunika izifundo ezongezelelweyo eziya kukunceda ukuqonda: akukho sizathu okanye akukho zixhala.
Ngokusekelwe kuphando lwezobugqirha, uphawu lokuthi u-hypocia wesisu luqalise ukwanda kwenani lentliziyo emntwaneni (kufika kwi-170 okanye ngaphezulu ngomzuzu) okanye, ngokuchaseneyo, ukunciphisa ngokweqile (ukuya kwi-110 okanye ngaphantsi komzuzu omnye). Kule meko, izandi zentliziyo zinokuphulaphulwa njengesithulu, kwaye i-arrhythmia nayo inokwenzeka. Enye yezinto ezibalulekileyo ukuxutywa kwe-meconium (ithole le-fetal) kwi-amniotic fluid.
Ukwelashwa kwamazinyo nge-anesthesia ngexesha lokukhulelwa
Ukuthengiswa kwenethiwekhi, ubutyebi okanye inkohliso?
Kombucha ngokulahlekelwa ubunzima
Yiyiphi amadoda okufanele ayigweme kwi-intanethi
UTimati wancoma uPotin kwividiyo kunye neKabaeva
Ukutya kukuchaphazela njani impilo yengane?
Kutheni sifuna amadoda ethu athandwayo kunye nendlela yokukhusela ngayo: Awukwazi ukuhamba
Umsongo weMvana kunye ne-chickpeas